आरक्षण जात ले होइन् गरिबले पाउने व्यवस्था बनाउछु – राजेन्द्र लिङ्देन – Cn Chautari
माघ २, २०७८ आइतबार 143
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र ।
पार्टी (राप्रपा) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जातका आधारमा दिइएको आरक्षणको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्।उनले जातका आधारमा दिइएको आरक्षणले सबै जनताको हित नहुने बताए।
देशमा व्याप्त भ्रस्टाचारका कारण नेपालीले दुःख पाएको बताउँदै लिङदेनले २०४६ सालपछिका सबै नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने बताए।अध्यक्ष लिङ्देनले नेताहरूको मानमर्दन गर्न र कार्यकर्ताहरूको विश्वासघात गर्न आफू नेतृत्वमा नआएको बताउनुभएको छ ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षहरूको जीवनकालमै आफ्नो पार्टीलाई देशकाे बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । आज आइतवार काठमाण्डाैमा शपथ ग्रहण गर्दै।
उहाँले दुई पटक मृत्युको मुखमा पुगेर पनि बाँचेको आफूले नेताको सम्मान र कार्यकर्ताहरूको भावनामाथि चोट नपुर्‍याइ आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने बताउनुभयो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्देनले यो मरो पनि बदमास रहेछ ।
भन्ने नपार्ने दृढतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनुभवी नेताहरूको साथ लिएर पार्टीमा गल्ती नगर्ने बताउनुभयो ।अध्यक्ष लिङदेनले भन्नुभयो, ‘राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी चलाउन सक्छ भन्ने आशङ्का छ ।
पार्टीमा म मात्रै कहाँ छु ? मैले भने हाम्रो श्रद्धेय तीन नेताहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रा पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ । मैले दाइ मानेका अनुभवी मानिसहरू हुनुहुन्छ ।
Prevप्रेम आले काठ तस्कर हुन्, आफू हीरो बन्न निजी क्षेत्रलाई तर्साउन खोजेः मंगल थापा
Nextसेयर गरौ।। सन् १९५० को सन्धि अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार वर्ग किमी जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने !
नाफा घाटा के हुन्छ केही नहेरि एमसीसी पास गर्छौं: गगन थापा (भिडियो हेर्नुस् ।